Vintana O 'ny irlandey Fortune Spins |
Vintana O 'ny irlandey Fortune Spins
Vintana O 'ny irlandey Fortune Spins dia ny maro loko slot lalao miorina amin'ny irlandey Folklore momba ny atao hoe tsara vintana Fairy Leprechaun. More tahaka an'i Dadabe Noely, Leprechaun fanomezana anao amin'ny entana ny vintana fa afaka mahazo ny harena anao. ao amin'io UK tsara indrindra afaka spins slots lalao, misy dimy reels sy mareva-doko telo andalana marika. Ny fototra dia maitso mavana maitso midadasika amin'ny avana mamirapiratra izay toa tena mavitrika ary manandratra ny fihetseham-po. Ny mozika sambatra izay milalao miaraka ny lalao manampy ny singa mahafinaritra ny foto-kevitra. Ny lalao dia manana fomba roa izay ahafahanao na milalao iray na efatra slot slots amin'ny fotoana. Ny Betting fetra ao amin'ny base lalao dia £ 0.10 ny £ 500 raha ny harena spins mamela anao miloka amin'ny £ 2 ny £ 500 isan-kofehy ireny.
Momba ny developer ny vintana O 'ny irlandey Fortune Spins
Io foto-kevitra miorina Leprechaun mareva-doko slot dia nanjary ny Blue Print lalao. Manana traikefa nandritra ny taona maro tao amin'ny aterineto ny orinasa Casino izay nanao malaza iray amin'ireo safidy ho an'ny Casino toerana ary koa ny mpilalao.
izany UK tsara indrindra afaka spins slots lalao dia nilalao sy ny tsara tarehy marika. Misy vola madinika vilany volamena, miaraka amin'ny mena, vatosoa manga sy maitso. Ny vilany volamena mandoa anao ny ambony tsato-kazo ny 500 vola madinika tamin'ny mariky dimy niseho. Card fanehoana an'ohatra avy 10 ny A an'i hametraka handoa sokajy. Misy paylines folo ao amin'ny lalao sy ny vola rehetra mifanila toerana marika avy amin'ny fomba roa. Misy tombony famantarana izay ny famantarana ny lalao ary hita ihany mandritra ny harena spins.
Fortune Spins: Izany no safidy ianao dia afaka mifidy izay teboka-potoana mandritra ity UK tsara indrindra afaka spins slots lalao. Afaka Fikarohana eo amin'ny lalao roa amin'ny fotoana tianao. Ny ampahany tsara indrindra dia ireo spins, misy efatra samy hafa reels slots dimy sy telo andalana tsirairay. Rehefa manomboka ny sehatra manokana manomboka milalao mozika eo aoriana.
Fandresena amin'ny Fortune Spins: Ny spins ity UK tsara indrindra afaka spins slots lalao ambaratonga miasa amin'ny fomba hafa noho ny base lalao. Eto ny tombony lalao Logo marika dia nanampy nandritra ny kofehy ireny tamin'ny voalohany slot. Ny isan'ny marika famantarana izay hita ao amin'ny slot voalohany dia replicated ao amin'ny sisa slots. Rehefa tapitra ny kofehy ireny isaky ny slot, marika maneho ny tombony ho mariky zava-miafina ary afaka handresy lehibe amin'izy ireo.
Amin'ny fomba roa samy hafa sy fomba roa-mariky ny tsikombakomba, izany UK tsara indrindra afaka spins slots dia tena ny tsara indrindra ho an'ny fanaovana ny tombony.